2011-04-24 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
myocafe@gmail.comး​ကို​ညီ ​ခင်​ဗျား။ ​ကျွန်​တော့် ​ကို hp pavilion tx1000 ​အ​တွက် window7driver ​တင်​ပေး​ပါ​လား​ခင်​ဗျာ။ internet ​မှာ ​ရှာ​လို့ ​မ​တတ်​လို့ ​ပါ။
​ကျွန်​တော် ​လိုက်​ရှာ​တာ xp , 2000, vista ​ပဲ ​တွေ့​ပါ​တယ် . window7​အ​တွက် ​မ​တွေ့​ပါ​ဘူး ​သူ့​မူ​ရင်း link ​ကို ​သွား​ကြည့်​လိုက်​ပါ
series6Nvidia grahics driver:
HP Wireless Assitant:
Motorola SM56 Data Fax Modem, download from V6700TX
heinmaungmg@gmail.com : ​အဲ​ဒါ​ဘယ်​လို ​ဖြေ​ရှင်း​ရ​မ​လဲ ​အစ်​ကို ​အ​ကုန် ​ပျံ့​နေ​တယ် ​စက်​ထဲ​မှာ်format ​လည်း​မ​ချ​ချင်​ဘူး​အစ်​ကို safe mode ​လည်း​မ​တတ်​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​တယ် anti-virus ​လည်း ​မrun ​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​တယ် ​ဘယ်​လို ​ဆို data ​မ​ပျက်​ဘဲ ​ဖြေ​ရှင်း​နိုင်​မ​လဲ . ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး ...
​ကျွန်​တော်​တော့ chrome virus ​မ​ရှိ​တဲ့​အ​တွက် ​သတ်​နည်း​ကို ​အ​တိ​အ​ကျ ​ရေး​ပေး​ဖို့ ​လို​အပ်​သွား​ပါ​တယ် . ​ရှာ​လို့​ရ​တဲ့ pdf ​စာ​အုပ်​လေး​တစ်​အုပ်​ကို​တော့ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ထဲ​မှာ​တော့ ​အ​ပြည့်​အ​စုံ​ရေး​ပေး​ထား​တာ​တွေ့​ရ​ပါ​တယ် . ​ရေး​တဲ့​သူ​က​တော့ ​ပြည့်​စုံ​လို့​ပါ​ပါ​တယ် . ​ဘယ်​က​လဲ​တော့ ​မ​သိ​ပါ​ဘူး . ​ပို့စ်​တစ်​ပုဒ်​တက်​ဖို့ ​ဓါတ်​ပုံ​တွေ​တင်​ရ ​ဘာ​တင်​ရ​နဲ့​ဆို​တော့ ​မ​လွယ်​လို့ ​သူ​တင်​ပေး​တဲ့ ​စာ​အုပ်​လေး​ကို​ပဲ ​ပြန်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​အ​ဆင်​ပြေ​လို့ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ချင်​ရင် ​အဲ့​ဒီ့​သူ​ကို​သာ ​ကျေး​ဇူး​တင်​လိုက်​ပါ ..
Download ifile.it | Download mediafire | Download ziddu | Download zshare